मह मिसावट भए नभएको थाहा पाउने सजिलो तरिका !! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more मह मिसावट भए नभएको थाहा पाउने सजिलो तरिका !!
मह मिसावट भए नभएको थाहा पाउने सजिलो तरिका !!
कात्तिक २४ गते, २०७६ - १४:००
मह स्वास्थको लागि निकैनै लाभदायक मानिन्छ । तर आजका मिसावटरहित मह बजारमा पाउन मुश्किल प्राय छ । मह मा मिसावट छ या छैन भन्ने कुरा छुट्टाउन नसक्दा हामी मिसावट भएको मह खान बाध्य भएका हुनसक्छौ । आखिर कसरी पहिचान गर्ने त महको शुद्दता रु
महलाई चिन्ने सबैभन्दा राम्रो र सजिलो तरिका तातो पानी हो । यसको लागि काँचको गिलास या कचौरामा तातो पानी भर्नु पर्छ । त्यसमा एक चम्चा मह हाल्नुपर्छ । त्यो मह पानीमा घुल्यो भने सम्झनुहोस् यसमा मिसावट छ । यदि पानीमा त्यो घुलेन भने मिसावट मुक्त मान्न सकिन्छ । मिसावटी मह बनाउनको लागि चिनी या सख्खरको प्रयोग गरिन्छ । त्यसैले त्यो पानीमा घुल्छ ।
अर्को पानीबाट जाँच गर्न सकिएन भने यसलाई आगोमा मिसाएर परीक्षण गर्न सकिन्छ । यसको लागि पहिले एउटा मैनबत्ती जलाउनुहोस् र त्यसमा एउटा काठमा कपास राखेर त्यसको बाहिर मह दल्नुहोस् । त्यो मह लगाएको कपास जल्यो भने त्यो मह शुद्ध मान्न सकिन्छ । त्यदि त्यो कपास बल्न समय लाग्यो भने त्यो महमा मिसावट भएको पुष्टि हुन्छ ।
महको शुद्धताको जाँच ब्लोटिङ वा टिस्यु पेपरबाट पनि गर्न सकिन्छ । यसको लागि टिस्यु पेपरमा महको एक एक थोपा हाल्नुपर्छ । यदि महमा पानीको मिसावट छ भने त्यो पेपरले पानी सोस्छ । शुद्ध मह भने त्यो पेपरको माथि नै रहन्छ ।
दैनिक खाने पाउरोटी पनि महको परीक्षणमा सहायक हुने गर्छ । शुद्ध मह पाउरोटीमा लगाउँदा त्यो कठोर हुने गर्दछ । जबकी मिसावट भएको मह पाउरोटीमा लगाउँदा झनै नरम हुने गर्दछ ।
महको एक थोपालाई बुढी औंला र चोर औंलाले च्याप्नुपर्छ । त्यसपछि बिस्तारै दुई औंला फट्याउनु पर्छ । यस्तो हुँदा दुई औंलाबीच मोटो तार बन्यो भने त्यो मह शुद्ध मान्न सकिन्छ । शुद्ध मह दुबै औंलामा टाँसिएर बसेको हुन्छ । त्यसैले यसमा तार बन्ने गर्छ । तर, मिसावटी मह त्यसै फाटिने गर्छ ।
काँचको गिलास या कचौरामा एक ठूलो चम्चाको एक चम्चा पानी हाल्नुपर्छ । त्यसमा २र३ थोपा सिरका र थोरै पानी हालेर राख्नुपर्छ । दुई तीन मिनेटसम्ममा त्यसमा फोका उठ्न थाल्यो भने जान्दा हुन्छ कि महमा मिसावट छ ।
कात्तिक २४ गते, २०७६ - १४:०० मा प्रकाशित
काठमाडौ । नेपाल प्रहरीले पोल्यान्ड पठाइदिन्छु भनी रु १७ लाख ठगी गर्ने एक महिलालाई पक्राउ गरेको छ ।...
मस्को । रूसले कोरोनाभाइरस खोपको ठूलो मात्रामा उत्पादन अर्को महिना सुरु गर्ने र सन् २०२१ को सुरूसम्ममा...
नेपालगञ्ज । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यालय...
साँगाबाट काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने १३ जनामा कोरोना पोजिटिभ
काभ्रेपलाञ्चोक । एक हप्तामा पूर्वी–नाका साँगाबाट काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने यात्रुमध्ये १३ जनामा...
राजविराज । सामुदायिकस्तरमा कोरोनाको सङ्क्रमण तीव्ररुपमा बढिरहेको भन्दै सप्तरी जिल्लाभरि स्थानीय...
काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतमा नेपालभरका पुराना थोत्रा गाडी हटाई सफा गरी हरेक कार्यालय स्वच्छ तथा वातावरणमैत्री...
काठमाडौ । नेपाल बैंक लिमिटेडले बजारको माग र चाहनाबमोजिम नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा कम ब्याजदर...
भोजपुर । भोजपुरको आमचोक गाउँपालिकामा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक जनाको ज्यान गएको छ भने तीन जना गम्भीर...
काठमाडौ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले तीन करोड नेपाली जनताको...
काठमाडौ । राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप) का नवनियुक्त सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले जुन विश्वासका...